Google iri kuwana Fitbit ye ​​$ 2.1B | Linux Vakapindwa muropa
Google iri kuwana Fitbit ye ​​$ 2.1B
Mazuva mana mushure mekunge runyerekupe rwaitika kuti Google yaive muhurukuro kuti itore Fitbit Inc., chibvumirano chave pamutemo, pamwe kumisikidza kurwa royale yenguva yekupedzisira ye smartphone-yakabatana michina.
Hofori yekutsvaga yataura nhasi izvo vakabvumirana kubhadhara $ 7.35 paFitbit share mumari yemari inoita $ 2.1 bhiriyoni. LChipo ichi chinomiririra chikamu che70% kumutengo wekuvhara wemugadziri wewatchwatch neChishanu, zuva rekupedzisira rekutengesa hurukuro dzekutenga dzisati dzaitwa kuruzhinji.
Fitbit inotengesa akateedzana ema smartwatches ayo anotendera vashandisi kuteedzera mashandiro avo, mhando yekurara, uye hutano. Chigadzirwa chitsva chekambani, iyo Versa 2, inosanganisira mamwe maficha anosanganisira kusangana pamwe neiyo Alexa izwi mubatsiri. Fitbit yakatumira anopfuura mamirioni zana emadhizaini kusvika parizvino uye inotaura kuti ayo akasiyana smartwatch mamodheru anoshandiswa nevanhu vane mamirioni makumi maviri nemasere pasirese.
Kunyange zvakadaro, iyo $ 7.35 pachikamu chiri kubhadharwa neGoogle inomiririra chidimbu chidiki kubva panguva-yese yakakwira madhora 51.90 iyo kambani yakasvika muna2015. Mutengo wemugove waFitbit nemugove wemusika watora rova ​​mumakore achangopfuura nekuda kwekukwikwidza kwakanyanya kubva kuApple, iyo inotungamira musika wewatchwatch nemuganhu wakakura neApple Watch yako.
Iko kutsvaga kweGoogle kunogona kureva kukwikwidza kumugadziri we iPhone. Investment bank Cowen & Co vakanyora mutsamba yekutsvaga kune vatengi izvo
"Iyo Fitbit chikuva inogona kuwedzerwa neGoogle tekinoroji pasi pehunhu hutsva uye kuti iyo Fitbit tekinoroji inogona kubatanidzwa mune zviripo Wear OS zvishandiso." Wear OS ndiyo yakapfupiswa vhezheni yeApple inopihwa neiyo hofori yekutsvaga yezvipfeko.
Imwe tekinoroji inogona kuita nzira yayo kuFitbit zvishandiso ndeye Google Mubatsiri. Tichifunga kuti iyo smartwatch inogadzira Versa 2 modhi inopa Alexa kusangana, hazvina kuoma kufungidzira kuti iyo Alphabet Inc. inotsigira inodawo kuita yayo yega sevhisi kuti iwanikwe kune vashandisi. Kuita izvi kunowedzera kusvika kweGoogle Mubatsiri kumamirioni emidziyo mitsva.
Fitbit's yakasimba brand kuziva zvakare ine kukosha Cowen akacherekedza kuti chibvumirano ichi chinobatsira Google al
"Kupa iyo kambani homboni yemhando ine kumira kwakasimba munzvimbo yekusimbisa muviri, chimwe chinhu chingangodaro chiri kushomeka munharaunda yeWear OS."
Kuwanikwa kweGoogle kweNest muna2014 kunogona kupa zvimwe zvinongedzo nezve zvirongwa zvehofori yekutsvaga. Mushure mekuwana Nest, yakawedzera zvakanyanya smart smart chigadzirwa chigadzirwa nekuwedzera Internet-yakabatana chengetedzo makamera, alarm, bhero repamusuwo, nezvimwe.
Google inogona zvakare kuisa mari pachiratidzo chaFitbit uye kuwedzera chigadzirwa chayo chikwereti kupfuura mawadhi akangwara kune mamwe mapoka ezvigadzirwa zvinopfeka.
Google inogona kunyange kubatanidza mhuri mbiri dzechigadzirwa pamwe chete. Iyo Apple Watch inobvumira vashandisi kudzora mamwe echitatu-bato smart kukiya neapp, chiitiko icho Google chave kugona ikozvino kuteedzera neFitbit watches uye iyo Nest bhero.
Rick Osterloh, mukuru webhizimusi reGoogle rehardware, akavimbisa mune blog blog kuti data revatengi rinounganidzwa nemidziyo yeFitbit harizoshandisirwe kushambadzira
Uye Fitbit co-founder uye mutungamiri James Park vakatsvaga kuisa izvo zvinonetsa kuzorora muemail kune vatengi. "Iwe uchagara uchidzora data rako uye isu tichava pachena nezvekuti ndeapi data atinotora uye nei," akanyora kudaro.
"Hatife takatengesa ruzivo rwako, uye data rehutano hweFitbit uye hutano hazvishandiswe kushambadzira kweGoogle."
Google inotarisira kuvhara kuwanikwa muna 2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google iri kuwana Fitbit ye ​​$ 2.1B
GIMP 2.10.14 inosvika pamwe nekugadzirisa uye kugadzirisa bug